Pr Zafy Albert : Fahombiazana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ireny! – MyDago.com aime Madagascar
Nanao valandresaka hoan’ny mpanao gazety teto amin’ny Villa La Franchise I Profesora Zafy Albert rehefa avy “nisakoroka” tetsy Anosy niaraka tamin’ ireo tompon’andraikitry ny Rodoben’ny Malagasy ho an’ny tanindrazana. « hanambatra ny vahoaka hanao rodobe fa tsy mimenomenona any an-trano, na any anaty birao na any am-pianarana fotsiny” no tanjona androany hoy I “prof”. Fanombohana iny hetsika androany ary mitohy hatrany manomboka rahampitso. Tsy misy korontana tadiavina ary izany no antony nanaovako teny teo anoloanan’ny fitsarana ary saika hanatitra hafatra tao amin’ny TVM sy RNM izay hataon’ny FAT ampihimamba izahay. Voafandrika ny iraisam-pirenena satria tsy misy ilay demokrasia nodradradradraina eran-tany, porofo ny tranga androany hoy ny filoha Zafy. Efa niteny na i Juppé na i Sarkozy ary i Obama sy ireo niala tamin’ny fitondrana tany Maghreb fa tsy mila famoretana atao amin’ny vahoaka. Tsy nanara-dalana ny fanaparitahana ny vahoaka androany hoy ihany izy . “Au ras du sol » ny fandefasana grenady ary tsy misy « sommation ». Raha tokony ho izy aza misy olona tahaka ny “chef district” mampitandrina.
Fahombiazana ho anay ireny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ary tsy mila fangatahana izany izahay satria zareo tsy ara-dalàna ary “caduque”.Ny “faux parlementaires CT sy CST” tsy voafidim-bahoaka no anisany sakana amin’ny famahana ny krizy“blocage” ka raha izao no mitohy dia hitovy amin’ny nataon’i Gbagbo ireny ny eto. Nisy tatitra vao azoko fa misy “bois de rose” 3 miliara indray tadiavina aondrana any ary ny havany ny FAT no ao anatiny, voatonona ao ny anaran’olona eny amin’ny Prezidansa. Aleon’ny FAT maty ny vahoaka toy izay ny tombotsoany no votsotra. Tafiditra tanteraka ao anatin’ny famahana ny krizy i Marc Ravalomanana sy i Didier Ratsiraka ka tsy mety ny resaka raha tsy eo izy ireo. Ary i Andry no nandaka ny fifanarahana tany Addis Abeba izay nandrara ny fodian’ny Ravalomanana, noho izany afaka mody i Ravalo sy Radidy hikatsaka vahaolana ho an’ny firenena. Tetezamita tena izy ihany no ilaina .Fanamarihana kely no nentin’Atoa Tabera Randriamanantsoa nampiseho ireo “bala-na baomba lakrimozeana” teny Anosy : « 52 no toy ireto, fandikan-dalana ireny satria roa metatra monja teo anoloan’ny Filoham-pirenena teo aloha Zafy Albert no nalatsaka ny voalohany. Azo tsaraina ilay kolonely mpanome baiko » hoy izy.
Précédent Article précédent : VIDEO, Ambiance Milay ANOSY, 18 may 11
Suivant Article suivant : Enfin, nous sommes décidés à nous exprimer !